HTML ( Chapter 4_Element, Attribute, Hyperlink ) | Myanmar Black Hacking
0 HTML ( Chapter 4_Element, Attribute, Hyperlink )
Element ဆိုသည်မှာ Start tag က နေစ၍ end tag ဆုံးသည့် တိုင်အောင် ပါဝင်မှုအားလုံးကို ခေါ်ပါတယ်။
အထက်ပါ ပုံတွင် start tag <p> မှ စပြီး end tag </p> အဆုံးထိ တစ်ကြောင်းလုံးကို element လို.ခေါ်ပါတယ်။ <p> tag ဖြင့် ရေးထားသောကြောင့် <p> element လို.ခေါ်ပါတယ်။
Content မပါဝင်သော HTML element တွေကိုတော့ empty element လို.ခေါ်ပါတယ်။ ဥပမာ <br> နှင့် <hr> တို.ဖြစ်ကြ ပါတယ်။ <br> သည် empty html element ဖြစ်ပြီး ၄င်းသည် keyboard မှ enter key function ကဲ့သို. လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ <hr> tag ကို horizontal line ပြုလုပ်ရာမှာ သုံးပါတယ်။ ၄င်းတို.သည် Empty html element များ ဖြစ်သောကြောင့် end tags </br>, </hr> များ မရှိပါ။
<p> This is first line <br> This is second line </p> <hr>
HTML elements တွေမှာ Attributes များ ရှိနိုင်ပါတယ်။ Attributes များကို Elements တွေရဲ့ additional information အတွက် သုံးပါတယ်။ Attribute ကို Start tag အတွင်းတွင်သာ ရေးရပါတယ်။
<a href="http://www.w3schools.com"> This isalink </a>
HTML Hyperlink (Links)
<a> tag သည် hyperlink tag ဖြစ်ပါတယ်။ Word, Group of words, Images စသည်တို.မှာ Hyperlink ကိုအသုံးပြုပြီး document တစ်ခုမှ တစ်ခုသို. ကူပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ Hyperlinks များပေါ်တွင် cursor တင် လိုက်ပါက Arrow ပုံမှ လက်ပုံ သို. ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ Hyperlink ဖြစ်သော <a> element ၏ attribute မှာ href ဖြစ်ပါတယ်။
HTML Link Syntax: _ <a href="url"> Link text </a>
<a> မှာ tag ဖြစ်ပြီး href မှာ attribute ဖြစ်သည်။
<a href="http://www.w3schools.com"> Click here </a>
<a href="http://www.w3schools.com" target="_blank"> Click here </a>
Target="_blank" ဆိုသည်မှာ link ကို click နှိပ်လိုက်တာနဲ. လက်ရှိ ကြည့်နေသော page မှာ မပေါ်ဘဲ browser ရဲ့ new tab မှာ link page ကို ပြ ပေးပါတယ်။
Ref by Maung ynh Web Design's note